दक्षिण अमेरिकाको चिलीमा नेपालीको अवस्था यस्तो छ – Dcnepal
सरोज अर्याल /चिली, दक्षिण अमेरिका
प्रकाशित : २०७६ चैत १५ गते ५:५८
नेपालभित्र कोरनाको महामारी नै फैलियो भने पनि नेपालले बेसार पानी खाएर जति सहज ढंड्गले लड्छ यूरोप अमेरिका जस्तो बिकसित देशका ७५ प्रतिशत जनताको हालत के छ ? हामीले अहिले देख्न थालेका छौं ।
दक्षिण अमेरिकामा नेपालीहरूलाई समस्या हुन सक्छ । भलै अहिलेसम्म कोही पनि संक्रमित भएको विवरण प्राप्त भएको छैन । हामी नेपालीहरु को त हालत कस्तो होला सम्झिदा पनि कहाली लाग्नु स्वाभाविक हो । हामीहरु गरिब देशका गरिव नगरिक त हुंदै हौं यता दक्षिण अमेरिकामा काम गरेर बसेकामध्ये कतिपयको काम नियमति हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि नेपाली दूतावासले आफ्ना देशका नागरिकहरु प्रति वास्ता पनि गरेको महसुस हुंदैन यहां । प्राय काम गर्ने ठाउहरु बन्द भएका छन् । चिलीका सबै ठाँउहरुमा करिब ३ सयको हाराहारीमा बस्दै आएका छौं । कोरोना महामारीको यो घडीमा कसैलाई केही भइहालेमा यहांको हालत के हुने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । भगवान शिव साथमा छन् भन्नुवाहेक अरु उपाय केही देखिएको पनि छैन ।
बस भाडा वा घरको भाडा तथा नियमित औषधि खानेले औषधि वा खानाका लागि केही जोहो गरेर बसेका त छौ तर यो महामारी २ वा ४ महिनाले लम्बियो भने के गर्ने कसरी जीवन धान्ने भन्ने पिरलो पनि शुरु भइसकेको छ किनकि फुड स्टाम्पले मात्र कति धान्ला र ? जागिर त अव धेरैको गुम्छ ।
हामी यहां भएका नेपालीहरु कहिले काहीं नेपालले अव के गर्ला भनेर टेलिफोनमा कुरा गर्छौं । कतिपयको भनाइ बढो ढुक्कको हुन्छ । नेपालीले १० औ बर्षको जनयुद्द , भुकम्प , नाकवन्दी सबै पचाइसकेका छन् । सधैं संकट भएकाले त्यसबाट कसरी बाच्नुपर्छ, जुध्नु पर्छ भन्नेमा अभ्यस्त पनि भएका छन् । नेपालमा त भोकमरी नै लागे पनि तीन हप्तामा त तोरीको साग उम्रन्छ, लगाएको १२० दिनमा त धान पाकेर पनि ढिकीमा कुट्टन मिल्छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो मेरुदण्ड र हतियार भनेकै यही हो भन्ने कुरा गछौं र ढुक्क पनि लाग्छ ।
कोरनासंग चेतनाले लड्ने हो । आफूसंग भएका साधन , स्रोत , ज्ञान र आत्मवलले लड्ने हो । प्रबिधिले र बमले कोरना सग लडेर हुन्थ्यो भने अमेरिका र ले युरोपले एक हप्तामा के के गरिसक्थे ।कोरनाको महामारीपछि बिश्वले नयां कुरा सिक्ने छ । हतियार र टेक्नोलोजि जति थुपारे पनि , जति आर्थिक उन्नति गरे पनि आखिर कोरनाले महाशक्ति भन्नेहरूका मुटु हल्लाई दियो । अझै हल्लाउने नै छ । युरोपको त लगभग आर्थिक रुपले तहस नहस बनाई दियो । युरोप अव आर्थिक रुपले उठ्न दशकौ लाग्छ । चीन एक्लै महामारीसंग जुधिरहंदा पश्चिमा देशहरूले सहयोग कता हो कता सामान्य साहनुभुति सम्म दिएनन् । चीन र चिनिया जनतालाई बदनाम र संसारभर अपमानित गर्न प्रचारवाजी समेत भयो । चीनको अर्थतन्त्र कतिसम्म टाट पल्टिन्छ भनेर गणितीय ब्याय मिटर लगाएर नाप्न तिरमात्र लाग्दा सो महामारी आफूसम्मै आइसकेको पत्तो पाउन नसक्नु अदुरदर्शिता थियो । आज फ्रान्स र इटालीजस्ता बिकसित देशले जनतालाई चीनको सहयोग बिना उपचार त परको कुरा माक्ससम्म उपलब्ध गराउन मुस्किल परेको छ । अमेरिका जस्तो देशले सर्बसाधारण जनतालाई आजको दिन सम्म सर्बसुलभ ढंड्गले माक्स र सामान्य सेनिटाईजर सम्म उपलब्ध गराउन सकेको छैन । कोरनाले युरोप र अमेरिकामा ल्याउने आर्थिक संकट , सर्बसाधारण जनताले गुमाउने जागिर र यसले समस्त बिश्व अर्थतन्त्रमा हान्ने धक्का त्यति चानेचुने हुने छैन अव ।